Ise siga elu-ike afọ nwere ike imebi akwara ozi ụbụrụ - News Ọchịchị
Ise siga elu-ike afọ nwere ike imebi akwara ozi ụbụrụ
Isiokwu a na-akpọ “Ise siga elu-ike afọ nwere ike imebi akwara ozi ụbụrụ” e dere site Ian ịlele Science nchịkọta akụkọ, n'ihi na The Guardian on Friday 27 November 2015 00.01 UTC
Elu-ike-afọ nwere ike imebi akwara ozi na ijikwa eruba n'ime ozi gafee abụọ halves nke ụbụrụ, ndị ọkà mmụta sayensị na-ekwu. Brain enyocha kwa nke ndị na-ahụ mgbe nile na-ese siga ike skonku-dị ka afọ kpughere aghụghọ iche dị na-acha ọcha okwu na-ejikọ ndị ekpe nakwa n'aka nri ammamihe na-eburu n'ókè site n'otu akụkụ nke ụbụrụ na nke ọzọ.
The mgbanwe na-adịghị hụrụ na ndị na-emeghi ji afọ ma ọ bụ smoked naanị obere nke nwere ike iche-iche nke ọgwụ, na-eme nchọpụta chọpụtara.
Related: afọ: ihe bụ ihe na a aha?
The ọmụmụ na-eche na-akpa na-ele anya na mmetụta nke afọ potency na ụbụrụ Ọdịdị, na-atụ aro na iji skonku nwere ike ime ka ihe e mebiri ruo corpus callosum, eme nkwukọrịta gafee ụbụrụ si ammamihe na-erughị oru oma.
Paola Dazzan, a neurobiologist na Institute of isi mgbaka na Eze College London, kwuru na mmetụta pụtara ìhè n'ihu ike jikọrọ larịị nke nọ n'ọrụ mgwa, tetrahydrocannabinol (THC), na afọ. Mgbe omenala iche nke afọ nwere 2 ka 4 % THC, ndị ọzọ nwere ike iche (nke e nwere ihe 100), nwere ike ịnwe 10 ka 14% THC, Dị ka DrugScope ọrụ ebere.
"Ọ bụrụ na ị na-corpus callosum, ihe anyị na-ịhụ bụ a ịrịba ihe dị iche na-acha ọcha okwu ahụ n'etiti ndị na-eji elu potency afọ na ndị na-emeghi-eji ọgwụ, ma ọ bụ na-eji ala-potency ọgwụ,"Kwuru Dazzan. The corpus callosum bụ ọgaranya cannabinoid anabata, nke THC chemical omume.
A DTI onyinyo nke corpus callosum, dị ka hụrụ si n'akụkụ, gosiri na red on na karịrị on a ndabere MRI onyinyo nke ụbụrụ. Foto: Institute of mgbaka
"Ihe dị iche bụ na e nwere ma ị nwere psychosis ma ọ bụghị, na anyị na-eche na nke a bụ nditịm kọọrọ ụmụ potency nke afọ,"O kwukwara. -Nkọwa nke ọmụmụ na-akọ na magazin psychological Medicine.
The nnyocha na-eji abụọ scanning usoro, magnetik resonance Onyonyo (MRI) na mgbasa tensor Onyonyo (DTI), na-enyocha corpus callosum, ndị kasị ibu na mpaghara nke na-acha ọcha okwu, na ụbụrụ nke 56 ọrịa bụ ndị kọrọ a mbụ na nwunye nke psychosis, na 43 ahụ ike afọ ofufo si mpaghara obodo.
The enyocha kwa chọpụtara na kwa ndị ọrụ nke elu-potency afọ nwere a dịtụ ukwuu - by banyere 2% - "Pụtara diffusivity" na corpus callosum. "Nke ahụ na-egosipụta a nsogbu na-acha ọcha okwu na-emecha-eme ka ọ na-erughị oru oma,"Dazzan gwara Guardian. "Anyị amaghị kpọmkwem ihe ọ pụtara n'ihi na onye, ma ọ na-atụ aro na e nwere obere oru oma nyefe nke ọmụma. "
The ọmụmụ nweghị ike ịchọpụta elu-etoju nke THC na afọ akpata mgbanwe na-acha ọcha okwu. Dị ka Dazzan ndetu, ọ bụ nwere ike ịbụ na ndị mmadụ na mebiri emebi acha ọcha okwu na-yikarịrị ka na-aṅụ sịga skonku na akpa ebe.
"Ọ bụ omume na ndị a ndị mmadụ na-ama nwere a dị iche iche ụbụrụ ha na-yikarịrị ka eji afọ. Ma ihe anyị nwere ike ikwu bụ ma ọ bụrụ na ọ bụ elu potency, na ọ bụrụ na ị na-aṅụ sịga ugboro ugboro, ụbụrụ gị si dị iche na ụbụrụ nke onye na-ese siga nkịtị afọ, na site na onye na-adịghị aṅụ sịga afọ mgbe nile,"Ka o kwuru.
Related: Ya mere ise siga skonku na-akpata psychosis, ma milder afọ adịghị?
Ma ọbụna na ejighị ihe n'aka n'elu kpatara ihe na mmetụta, ọ kpaliri ndị ọrụ na ahụ ike ọha ọrụ ịgbanwe otú ha na-eche banyere afọ ojiji. "Mgbe ọ na-abịa na-aba n'anya, anyị na-eji na-eche echiche banyere otú ihe ndị na-aṅụ, nakwa ma ha na-aṅụkwa mmanya,, biya, ma ọ bụ wiski. Anyị kwesịrị iche echiche nke afọ n'ụzọ yiri nke ahụ, na okwu nke THC na dị iche iche dị afọ nwere ike inwe, na nwere mmetụta na ahụ ike ga-adị iche,"Ka o kwuru.
"Dị ka anyị na-atụ aro na mbụ, mgbe adabere na ya kpebie afọ ojiji, ọ dị oké mkpa iji kpokọta ozi on otú mgbe na ihe ụdị afọ a na-eji. Ndị a nkọwa nwere ike inyere gụpụta ihe ize ndụ nke iche echiche nsogbu ahụ ike na-amụba mmata nke ụdị mmebi a bekee nwere ike ime ka ụbụrụ,"O kwukwara.
na February, Dazzan na ndị ọzọ na Institute of mgbaka kọrọ na njikere e skonku na ndịda London nwere ike ịdị na-akpata a ịrị elu na nkezi nke ọhụrụ ikpe nke psychosis a na-ekewet afọ.
32027	0 Nkeji edemede, afọ, ọgwụ ọjọọ eme ihe, Health, Ian Sample, Main ngalaba, Mental Health, Neuroscience, News, Isi mgbaka, Science, The Guardian, UK ozi ọma
← 30 Christmas onyinye echiche n'ihi na tech-savvy ụmụ Iri nke kasị mma ngwa ọdịnala na-eme gị Christmas shopping →